Geofeedia: Kormeerka Warbaahinta Bulshada, Sirdoonka iyo Falanqaynta Goobta | Martech Zone
Geofeedia waa madal shatiyeysan oo suuqleydu ay uga faa'iideysan karaan kormeerka iyo falanqaynta warbaahinta bulshada ee ku saleysan goobta. Tani waxay noqon kartaa istiraatiijiyad suuqgeyn aad u faa'iido badan u leh maareynta sumcadda, ama istiraatiijiyad raadin firfircoon. Waxaa laga yaabaa inaad tahay adeeg bixiye ama aad leedahay wakiillo badan oo adeegyo ah oo ku sugan dhulal cayiman - waad la socon kartaa dhammaan taraafikada warbaahinta bulshada si aad u sheegto ama macaamiisha mustaqbalka ee raadinaya caawimaad.
Noocyada Muhiimka ah ee Geofeedia iyo Faa'iidooyinka
Monitor - Isu soo uruur oo keydso waxyaabaha ku jira baraha bulshada ee gobollada la qeexay.
Filter - Sifee natiijooyinka raadinta ereyga muhiimka ah, adeegsadaha, maalinta, saacadda, isha warbaahinta bulshada iyo inbadan.
arki - Aragtida khariidadu waxay muujineysaa meesha saxda ah ee ay ka kooban tahay, muuqaalka wadajirka ah wuxuu ku tusayaa waqtiga iyo isku xigxiga qoraalada iyo socodka tooska ah wuxuu soo bandhigayaa waxyaabo cusub waqtiga dhabta ah oo ka imanaya meelo badan shaashad keliya.
falanqeeyaan - Xogta aan keydiyay si aan u ogaado isbeddelada ereyada muhiimka ah, waxqabadka waqtiga ku saleysan, boodhadh saameyn leh, isbeddellada dhaqdhaqaaqa, ilaha warbaahinta bulshada iyo inbadan.
archive - Ku keydi xogtaada xarun xogta daruur ku saleysan dib u soo celinta iyo falanqaynta mustaqbalka.
dhoofinta - Geofeedia wuxuu bixiyaa API muuqaal ah, dhoofinta CSV, widget-yada la-beddeli karo iyo dhoofinta xogta RSS ee qaababka ATOM, GeoRSS ama JSON.
qaylodhaan - Ku hel digniino emayl toos ah waqtiga dhabta ah oo ku saleysan keyword gaar ah ama kiciyaha magaca isticmaalaha.
Translate - U turjun natiijooyinka raadinta ku dhowaad luqad kasta adigoo gujinaya hal guji.
U Samee Xuduudaha Khaaska ah Su'aalahaaga Warbaahinta Bulshada
Ka eeg Goobta Ku-saleysan Su'aalaha Warbaahinta Bulsheed adoo adeegsanaya 'Collage'
Falanqee Warbaahinta Bulshada ee Ku-saleysan Goobta
RTS - Muuqaalka Khariidadda
RTS - Falanqaynta
Duubista Falanqaynta & Dareenka
Saameeyayaasha - Muuqaalka Collage
Si aad wax dheeraad ah uga ogaato bartilmaameedka juquraafi ahaaneed, soo dejiso warqaddooda cad, "Roadmap-ka Suuqa Markaynteeda", maanta.
Soo Degso Khariidadda Jadeecada Bulshada
Tags: keydso warbaahinta bulshadaadgeofeediajuquraafi ahaandigniinta warbaahinta bulshada juqraafigisfalanqaynta warbaahinta bulshada ee ku saleysan goobtasirdoonka baraha bulshada ee goobta ku saleysandigniinta baraha bulshadabaraha bulshadasirdoonka warbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshada